လဲမှို့ poplin ထည်-120GSM ရောင်းချ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 120g / မီတာ? (3.53OZ) မျိုးကိုရက်: Poplin အကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်: CM40xCM40 133x72 အကျယ်: 145 / 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုမှု: 60 ° C တွင်ရေဆေးစရာစက်မှုတာဝန်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%): အဆိုပါရှပ်အင်္ကျီန်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့အဝတ်အစား ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရောင်များကိုက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်စက်မှုမှတာရှည်ခံအရောင်ကြာရှည်ခံမှု: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 125g / မီတာ? (3.68oz) မျိုးကိုရက်: 4/1 ဖဲအကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်: M40 * D40 127x79 အကျယ်: 145 / 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုမှု: ရေစက်မှုတာဝန်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%): အဆိုပါရှပ်အင်္ကျီန်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့အဝတ်အစား 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အရောင်ကြာရှည်ခံမှုကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရောင်များမှာအဝတ်လျှော်: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
လဲမှို့ရိုးရိုး Calico ထည်-110GSM ရောင်းချ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 110 g / မီတာ? (3.24oz) မျိုးကိုရက်: 1X1 ရိုးရိုး / Calico အကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်: 30x30 68x68 အကျယ်: 145 / 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုမှု: ရေအဝတ်လျှော်ဘို့စက်မှုတာဝန်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%) မှာ: အယူနီဖောင်းဝတ်န်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့အဝတ်အစား 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကိုက်ဖြတ်ရန်တာရှည်ခံအရောင်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရောင်များ: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
လဲမှို့ Jacquard စစ်ဆေးမှုရောင်းချ
ဝါဂွမ်း JACQ နေစစ်ဆေးခြင်း
Stretch poplin ရောင်းချ
ကုဒ်: SP-36 အမျိုးအစား: Stretch စီးရီးအမည်: Stretch poplin အထူးအသေးစိတ်:? 400င် + 40D 1332အနံ:
ကုဒ်: ကို C-56 အမျိုးအစား: 100% ဝါဂွမ်းစီးရီးအမည်: အကြီးစား-စက်ပန်းထိုးအထူးအသေးစိတ်:? 600င် 90 8 အနံ:
ကုဒ်: SP-33 အမျိုးအစား: Stretch စီးရီးအမည်: Full-စကေးလမ်းပိုင်းအထည်အထူးအသေးစိတ်:? 400င် + 40D 1200င်အနံ:
စစ်ရေးထုတ်ကုန်ကို C ရောင်းရေတပ်ဆိပ်ကမ်းကိုသိုးမွှေးအထည်
ကုဒ်: အမျိုးအစား: Antistatic စီးရီးအမည်: စစ်ဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ကို C ရေတပ်ဆိပ်ကမ်းကိုသိုးမွှေးအထည်အထူးအသေးစိတ်: အနံ:
စစ်ရေးထုတ်ကုန် B ကိုရောင်းချရန်
ကုဒ်: အမျိုးအစား: Antistatic စီးရီးအမည်: စစ်ဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန် B ကိုအထူးအသေးစိတ်: အနံ:
21 - 30 Total 40 (4 pages)